အဆိုပါကင်ဆာ Spreading - ထိုကာရံ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » ကနျြးမာရေးသတင်းများ "ဒီကင်ဆာ Spreading - ထိုကာရံ
အဆိုပါကင်ဆာ Spreading - ထိုကာရံ
Tele RELAY တစ်ခု 17 ဇူလိုင်လ 2019
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျွန်မတစ်ဦးကရေးသားခဲ့သည် အပိုင်းအစ ကျနော်တို့အပေါငျးတို့သ n-စကားလုံးဟု Donald Trump ၏တိပ်မရှိမျှော်လင့်ပါတယ်ဒါကငြင်းခုံသင့်ပါတယ်။
ဤတွင် nub င်:
[n] o သူတို့ကနေ့၏အလင်းကိုမြင်ရ, ဘယ်တော့မှမတည်ရှိဘူးဆိုရင်သင့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကို Trump အကြောင်းကိုတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာအရေးမကြီးပါဘူး, သငျသညျ, ထိုစာတမ်းတိပ်ခွေမျှော်လင့် shoulds ။ ။ ။ ။ သငျသညျသူသူ့အခြေစိုက်စခန်းထံမှထောက်ခံမှုဆုံးရှုံးသွားချင်ပါတယ်ထင်ပါသလား? ။ ။ ။ အဆိုပါ N-စကားလုံးသုံးပြီးဘို့ရွှေကို၎င်း, ငါမကျင့်။ သမ္မတရဲ့ core ကိုထောက်ခံသူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြှနျုပျတို့သိအရာအားလုံးအဘယ်သူမျှမကောက်ရိုးအဆက်မပြတ်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းမှနောက်ပြန်ဆုတ်သွားခဲ့ပြန်-သာမပြုနိုင်င်ဒါကကုလားအုပ်ချိုးမည်ရှိပါသည်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
ဤသည်စင်စစ်ဇာတ်ကောင်က de သားအခြေစိုက်စခန်းအပေါ်မှတ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်သူ့အခြေစိုက်စခန်းနှင့်အတူစတင်ပြီးသားဘယ်လောက်ကျဉ်းမြောင်းတဲ့အကြောင်းပိုမိုင်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ခိုင်မာတဲ့ရီပတ်ဘလီကန်ထောက်ခံသူများထဲတွင် Trump ၏မကျြနှာ rating အလွန်မြင့်မားသည်: 93 ရာခိုင်နှုန်းကို လူအများ၏အဘယ်သူသည်ဤအကြောင်းအရာကိုမှ _him_ ၏အတည်ပြု 2016 အတွက် _him_ အဘို့အမဲပေးခဲ့သည်။ အခြားလူတိုင်းအတွက်များထဲတွင်မိမိအခွင့်ပြုချက်တွေကလုပ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါသည်: တသီးပုဂ္ဂလများထဲတွင် 39 ရာခိုင်နှုန်းကို; ဒီမိုကရက်9ရာခိုင်နှုန်းခန့်အနက်။ ရုံတည်ဆောက်ပုံကိစ္စအဖြစ်, သူအဲဒီအုပ်စုတွေဖြစ်စေနဲ့အတူလဲကြရန်အလွန်ဝေး-မရှိပါ။ လျှင်နောက်ဆုံးနှစ်နှစ် Trump ပြီးသားတော်တိုက်မြစ်ပေါ်မှာအနားယူနေသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရှုပ်တော်ပုံ-ပြီးတော့, ရုရှား, Kim Jong-un ၏ fluffing ကိုခြီးမှမျးနေချိန်မှာအမေရိကားရွားနေသော, မဆိုလမ်းညွှန်မုန်တိုင်းထန် Daniels, အခွန်ဖြစ်ကြသည်။
ပန်းတိုင်ရဲ့ဒါက Trump ထွက်ပေါက်နိုင်ဟန်ဆောင်ပါစေ, အဲဒီနှစ်မှာ N-စကားလုံးတိပ် အလိုတခုတည်း ဒါကနောက်ဆုံးတွင်ကုလားအုပ်ရဲ့နောက်ကျောချိုးကောက်ရိုးဖြစ်လိမ့်မည်။ ရဲ့ Trump ၏မကျြနှာရီပတ်ဘလစ်ကန်များထဲတွင်ပြိုကျဒါကဟန်ဆောင်ကြပါစို့။ အဘယ်အရာကိုထိုအခါ? သူကနုတ်ထွက်ဖို့မသွားရဲ့။ သူကရုံးကနေစွပ်စွဲပြစ်တင်ခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားခံရဖို့မသွားရဲ့။ အဆိုပါ #Resistance စိတ်ကူးယဉ်တချို့ကအဲဒီ Is Deus ex machina Trump ပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မည်။ ဒီအဖြစ်ပျက်သွားမပေးပါ။ သူ 2020 အတွက် re-ရွေးကောက်ပွဲရှုံး Trump အရွက်လျှင်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးကောင်းနဲ့နေမကောင်းများအတွက်သမ္မတ Trump ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်မှန်သည်နှင့်သူ _him_ န်းကျင်ကမ္ဘာကြီးကိုအပေါ်သက်ရောက်မှုဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်ယခုကျွန်တော်တစ်ဦး Trump လာမည့်နှစ်နှစ်နဲ့တူအားနည်းခံရမလားအဘယ်အရာကိုစိတ်ကူးရပေမည်။ သငျသညျ, သူကဆင်း knuckle ချင်ပါတယ်ထင်နေတဲ့နိုငျငံရေးနဲ့တူသရုပ်ဆောင် start နှင့်တိုင်းပြည်စည်းလုံးဖို့ကြိုးစားသလား? သို့မဟုတ်သင်သူ (ကိုထပ်) တစ်ခုအတွင်း၌ဖြောင့်ဖို့တနည်းတဖုံဆွဲ၏မျှော်လင့်ချက်များပိုမိုပရမ်းပတာနှင့်ဌာနခွဲတွန်းအားပေးချင်ပါတယ်ထင်ပါသလဲ သူမယူဆ, Trump ရဲ့ရှုထောင့်ကနေထိုသို့သောနည်းဗျူဟာ၏တစ်ခုတည်းသောဖြစ်နိုင်တာတော့ခြွင်းချက်ပေါ့, မဆိုအလားအလာဆက်ခံဘို့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးဘဝကို၏မြေပြင် salting ပါလိမ့်မယ်။ ထိုအသူသည်သင်တို့အင်္ဂါရပ်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ bug ကိုအတိုင်းဤမကြည့်မလား။
သင် Trump အုပ်ချုပ်ရေးကိုကြည့်ကပိုမိုဆိုးရွားမရနိုငျထင်ရှိလျှင်, ထိုအခါကိုသင်တို-ကြည်ပြာပန်းတစ်ပူလောင်-မြေကြီးတပြင် Trump ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်အဘယ်အရာကိုစဉ်းစား။ အဆိုးဆုံးရလဒ်ကိုအနည်းဆုံးထင်ကြေးများနှင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်၏ The One ဖြစ်ပါတယ်ရည်ရွယ်ပါသည်။ အမှုအရာအခုရပ်အဖြစ်အများပြည်သူဘဝ၌ကျန်ကြွင်းစံချိန်စံညွှန်းလက်တဆုပ်စာနေဆဲရှိပါတယ်။ အဆိုပါ N-စကားလုံး '' em များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုမ။ ကျနော်တို့အဲဒီစံမှအပေါ်ကိုကိုင်ထားနိုင်လျှင်ဒါဟာကောင်းတဲ့လိမ့်မည်။ ဒါဟာဟုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏သမ္မတတစ်ဦးတိပ်ကျွန်တော်-ရှိသည်နှင့်သူမျှမနီးသောအကျိုးဆက်များကိုခံစားနေရပါလျှင်, ဒါကစံချိုးဖဲ့လိမ့်မည်။
"နောက်ကျောသင့်ကိုယ်ပိုင်တိုင်းပြည်ကိုသွားပါ" က Sami အဘိဓါန်ဇစ်ကုဒ်အတွက်ရည်ရွယ်ချက်င်အတိအကျ N-စကားလုံးဟု Trump ၏တိပ်ခွေမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတစ်ခါလည်း Sami အဘိဓါန် ballpark ။
အဆိုပါရီပတ်ဘလီကန်အခြေစိုက်စခန်း _him_ အပေါ်နှိမ့်ချနှစ်ဆတက်လာသည်။ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရီပတ်ဘလစ်ကန်-ထားသောစံချိန်ပေါ် _him_ နှင့်အတူရပ်နေ၏။ ရီပတ်ဘလီကန်မဲဆန္ဒရှင်များထံမှခွင့်ပြုချက်နံပါတ်များ တိုးမြှင့်.
နှင့်လုံးလုံးလြားလြားလူမျိုးရေးခွဲခြားမှု၏အမည်းစက်နေရာတိုင်း evaporating ဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျဖြစ်ကောင်းဝက်ဘ်ဆိုက်၏ကြားဖူးတယ် အမေရိကန်ကြီးမြတ်မှု။ ဒါဟာစဉ်းစားအဲဒီလူရဲ့ OANN ပါပဲ။ ဒါဟာကျင့်ဝတ်နှင့်ပြည်သူ့ပေါ်လစီရေးစင်တာမှဗစ်တာ Davis က Hanson ကနေထိုသို့သောဟင်နရီ Olsen အမျှအများအားဖြင့်စာမတတ်သူ cranks, ရည်မှန်းချက်သြစတေးတချို့ကဂုဏ်သရေရှိလူများ, ထုတ်ဝေ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း နှင့်ဟူးဗား Institution မှ။
ဒီအပတ် အမေရိကန်ကြီးမြတ်မှု ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအမည်ဝှက်စာဖြင့်ရေးသားကဗျာကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ "Cuck Elegy ။ " ငါကလင့်ထားသည်ဖို့မသွားဘူး။ ဒါဟာတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် တိုက်ခိုက်မှုဒါဝိဒ်သည်ပြင်သစ်ဖြစ်ပါသည် နှင့်စာရေးသူယုံကြည်သောသူသည်အခြားရှေးရိုးစွဲလွန်းကိုတိုက်ဖို့လုံလောက်တဲ့ဆန္ဒရှိလက်ဝဲနှင့်မများ၏ခွင့်ပြုချက်ရတဲ့အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေကြတယ်။ ။ ။ ကောင်းစွာများအတွက်သမျှ။
အဆိုပါ "ကမ္တာ့တောင်ပိုင်း"? "ဒီ Mocha-skin လာဇရုကို"?
"သင်ပြုလျှင်သင်၏အဖြူရောင်အသားအရေအတွက်ငွေသား _him_ ထက်ပိုမိုကြွယ်ဝသောမှန်လျှင်မရ"?
ငါလူမျိုးရေးခွဲခြားမှု-နှင့်မရိုးသား-to-ဘုရားသခငျ, KKK-စတိုင်အဖြူအမျိုးသားရေးအမှန်တကယ်ရည်ရွယ်ချက်ပဲလူမျိုးရေးခွဲခြားမှု, ထက်အခြားဘာမှအဖြစ်ဤဖတ်ရှုဖို့မသိရပါဘူး။
အထူးသဖြင့်ကတည်းက-နောက်တဖန်-ရေးသားသူတစ်ဦးကလောင်အမည်အသုံးပြုနေသည်။ ဘယ်တစ်ပါးပျဉ်းဝတ်ထား၏ writerly ညီမျှသည်။ ဒီအတှကျအပြစ်မဲ့အနက်ရှိပါတယ်ခဲ့လြှငျ, ထိုအခါကအပေါ်စာရေးသူကရဲ့နာမညျကို Be မလား။
ဒီ post ကို 72 Trump မှပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များအမေရိကတိုက်ရဲ့ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်အချို့ကိုပြောပြစတင်ခဲ့ပြီးနောက်-နာရီ Donald Trump ၏အစဉ်အမြဲနှင့်စုစုပေါင်းကာကွယ်ရေးမှမြှုပ်နှံက်ဘ်ဆိုက်သည်ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်ဒါကတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ပါဘူး "ပြန်သင့်ကိုယ်ပိုင်တိုင်းပြည်သွားပါ။ "
ကြီးထွားလာအဖြူအမျိုးသားရေးစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့စကားလုံးက "စိတ်ပျက်စရာ" အတော်လေးကတရားမျှတမှုကိုမပြုပါဘူး။ ထိုသို့ထက်အများကြီးပိုဆိုးပါတယ်။
အဆိုပါအနီး-သက်တမ်းအန္တရာယ်လုံးဝစာသားသူမအရာအားလုံးကို Defending မှကျူးလွန် Call, အောင်စ Trump ပရမ်းပတာဖက်ရှင်သို့သွားသည်နှင့်သူ၏အခြေစိုက်စခန်းလုံးဝဘယ်လောက်အကြောင်းကိုငါပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီကရေးသားခဲ့သည်အရာကိုအခြားတစ်ဝက်ဖြစ်ပါသည်, ကျနော်တို့-ပြီအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာအကျပ်အတည်းမှတံခါးကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့။
အင်ဒရူး Egger လှည့်ပတ်ပြီးမှ သူတို့ရဲ့ Fellow ဥပဒေပြုနိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့တိုက်ခိုက်မှုရှုတ်ချ non-စည်းနှောင် resolution အတွက်မဲပေး (မီးဖိုမှုးမတ်ခြွင်းချက်နှင့်အတူ) ရီပတ်ဘလစ်ကန်ငြင်းဆန်အကြောင်းကိုသူ့အခန်းထဲမှာခုနှစ်တွင်ဒါကစိတ်ကူးယနေ့နံနက်:
ဥပဒေပြုအမတ်များကဒီမှာစဉ်းစားကြည့်ပါရန်အဘို့အအကျိုးစီးပွားမပဋိပက္ခရှိ၏ အမှတ်ရှေးရိုးစွဲ "ပိုမိုမြင့်မားကောင်းမွန်သော" ရှယ်ယာမှာခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကတစ်ဦးထိုင်ခုံ SCOTUS ကိုရွှေအခွန်ဖြတ်စွန့်လွှတ်မှရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ။ ဒါဟာအခမဲ့ပြုလုပ်နိုင်စေခဲ့သည်။ ရုံအမတ်များမေးခွန်းအပေါ်တုံ့ပြန်အတွက်စံချိန်အပေါ်သွားကြဖို့လိုအပ်ခဲ့ကြသည်: Donald Trump ရုံ Said baldly လူမျိုးကြီးဝါဒအရာရှိပါတယ်, သငျသညျဆန္ဒပြမှု၌ကိုယ်တော်၏အသံကိုမြှင့်ကြလိမ့်မည်နည်း လက်တွေ့အဘယ်သူအားမျှလိမ့်မယ်။ အဲဒါကို 'em အများကြီးဘက်သို့ ထပ်. ထက်ကျဆင်းကြည့်ဖို့ခဲယဉ်းပါတယ်။ အားလုံးရည်ရွယ်ချက်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်, ဒီသမ္မတဖို့ GOP ၏သဟာယယခုပြည့်ဝ၏။
သငျသညျကငျြ့ဝတျဆိုဖှယျဒီစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်လူမိုက်တို့ကိုရွှေရွှေကိုရှာဖွေနိုင်ပါစေ။ ဒါကြောင့်အဲဒီသန်းအများကြီးပိုဆိုးသည်ရည်ရွယ်ထား: ဒါဟာအန္တရာယ်ပါပဲ။
ရီပတ်ဘလစ်ကန်-ရှိသည်ဟုအမြဲ Trump ရဲ့အာဏာရှင် Impulses သတင်းပို့နေသော်လည်းသူလုပျဆောငျဖို့ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ဘယ်တော့မှမလားမိမိတို့ကိုယ်သည်ဟုပြောဆိုခဲ့ကြောင်း em ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ၏ guardrails လွန်းအားကြီးသောကြသည် ဟူ. ၎င်း, ပါတီ၏အဓိကကိုယ်ထည်သာယခုအချိန်အထိ _him_ သွေပါစေမလား Reviews ။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဒီမေးပါ: ရီပတ်ဘလစ်ကန်လွှတ်တော်အမတ်တွေကိုထောကျပံ့မပေးနိုင်ပါလျှင်လူမျိုးရေးခွဲခြားစာတမ်းအဖြစ်သဘောထားမှတ်ချက်ရှုတ်ချ Non-binding resolution ကိုရှိပါတယ်, ထို့နောကျအဘယျသို့ line ကိုရနိုင်ပါသလား Trump လက်ဝါးကပ်တိုင်ဒါကသူတို့က အလိုတခုတည်း ကျနော်တို့ပြန်တွန်း '' em တစ်ခုခုကုန်ကျမယ့်ခဲ့အထူးသဖြင့်လျှင်, နောက်ကျောတွန်း?
အဘယ်သို့လျှင်ရုံအတှကျအ-ဥပမာအားဖြင့်အဖြစ်, Trump 2020 အတွက်ကျဉ်းမြောင်းသော margin ကရှုံးနိမ့်ခြင်းနှင့်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်သလဲ? အဘယ်အရာကိုသူကသူ့ရှုံးနိမ့် "တရားမဝင်မဲ" ၏ရလဒ်နှင့်ခဲ့ "အကြံအဖန်စနစ်။ " မလုပ်ပဲလျှင် (ထိုသူသည် 2016 ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီးလုပ်စွပ်စွဲချက်။ ) ယခုကြှနျုပျတို့ရီပတ်ဘလစ်ကန်လွှတ်တော်အမတ်တွေသူ့အရှုံးခံမလားဒါက, ထိုသို့သောဖြစ်ရပ်တစ်ခုအတွက်, ဒါကယုံထင်နေ အန္တရာယ်ရှိအဖြစ်အပြုအမူ? သူတို့ဟာ Trump ကိုရပ်တန့်ခြင်းနှင့်လွှဲပြောင်းတန်ခိုးနှင့်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သည်ဟုအပြင်းအထန်တောင်းဆိုပါ့သလော
လူအပေါင်းတို့သည် Trump အကြောင်းကိုအခြေခံဥပဒေကမ္ဘာပျက်ကး၏စာလုံးပေါင်း conjure: သူလွှတ်တင်လျှင်နျူကလီးယားဒုံးကျည်များဇီးခဲ့ကြသည်ဘာလဲ? အဘယ်အရာကိုသူတစ်ဦးကိုတတိယသက်တမ်းအတွက်ကို run ရန်ဆုံးဖြတ်သည်လျှင်?
အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းသည်ရည်ရွယ်ချက်, သူများသည်ကး Trump ထံမှတချို့ကအနည်းငယ်ပြုပြင်ထားသောအပြုအမူလိုအပ်သည်။ သူတို့ဟာသေးအကောင်အထည်မမူကားအဘယ်သူတစ်ဦး Trump စိတ်ကူးယဉ်လိုအပ်သည်။
ငါ့အဘို့, ကြီးမားတဲ့စိုးရိမ်ဒီဖြစ်ပါသည်: အဘယျသို့ရွေးကောက်ပွဲ 2020 မတိုင်မီရက်သတ္တပတ်ခြောက်ပတ်လျှင်သူ Sami အဘိဓါန်ခြောက်ပတ်အတွင်းရွေးကောက်ပွဲ 2016 မတိုင်မီ Said အတိအကျအရာတို့ကိုပြောပါတယ်?
ဒါဟာသိသိသာသာင်သောကြောင့်, ငါမပြုမီဒီနှိုးစက်ကြီးပြင်းတော့ငါပြန်ပြုပါလိမ့်မယ်။ 2016 ဖို့ run ကို-Up မှာတော့ Trump Said Que la contre _him_ ရွေးကောက်ပွဲကိုအကြံအဖန်နှင့်ဆိုလိုသည်မှာသူသည်ရလဒ်လိုက်နာပါ့ဆိုရမည်ရန်ငြင်းဆန်ခဲ့။ ပြားချပ်ချပ်ထွက်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်သူဟာတကယ်တော့နာမည်ကျော်မဲအနိုင်ရချင်ပါတယ်အရေးဆိုထားသော။
အောက်တိုဘာလ 2020 အတွက်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထဲမှာထိုင်လျက်အမိန့်ကိုသူရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်အားဖြင့်လိုက်နာကြလိမ့်မည်ဒါကပြောပါဖို့ငြင်းဆန်လျှင်ဒီတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲ
ထိုသို့ဖြစ်လျှင်အဘယ်သို့ရွေးကောက်ပွဲနီးကပ်သည်နှင့် Trump ရှုံးမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပျက်နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ထိုင်လျက်နိုင်ငံတော်သမ္မတ Que la ရလဒ်များကိုလိမ်လည်ဖြစ်ကြပြီးအဖြစ်မှန်အတွက်သူပေါ်ပြူလာမဲအနိုင်ရဒါကပြောပါတယ်?
ဒါတွေကိုမဆို extrapolation ကိုရွှေစိတ်ကူးစိတ်သန်းလိုအပ်သည်။ ဒါကအတွေးစမ်းသပ်မှုမဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့သာသူပြီးသား Said နှင့် Sami အဘိဓါန်အခြေအနေတွင်ပြုသောအမှုဖွင့်သောအရာတို့ကိုအသုံးပြုနေသည်။
ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်-ရှိသည်ဟု Mitch McConnell နဲ့ဒီအုပ်စုတစ်စု၏ရန်ပွဲဖြစ်လာမပေးမလားအဲဒီအတွက်ရီပတ်ဘလစ်ကန်မယ်ဆိုတာကိုအခြားအရွယ်ရောက်ခြေလှမ်း, ဒါက, စိတ်ပူဖို့မကိုပြောသည်။ ဒါကအရွေးခံရရီပတ်ဘလစ်ကန်အဘယ်သူမျှမနှောင့်ရှက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းမှ libs ခွဲခြားပိုင်ဆိုင်ဖူးမလား။ ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးတွင်တချို့ကစျေးနှုန်းပေးဆောင်ဆိုလိုရင်တောင်။
အင်္ဂါနေ့ရဲ့မဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ scariest ရာလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာတွန်းအားပေးတွန်းထုတ်တဲ့မှကြွလာနှင့်ကျွန်တော်တစ်ဦးကို real-သဘောတူညီချက်အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာအကျပ်အတည်းအတွက်တက်လေဘူးဆိုရင်ကျနော်တို့ကသူတို့တာဝန်လုပ်ဖို့ရီပတ်ဘလစ်ကန်အရွေးခံရရေတွက်ဖို့ BLE လိမ့်မည်မဟုတ်ပေဒါကကွိုဖြစ်ပါတယ်။
ကြီးစွာသောလိုင်းရှိပါတယ် LA ကလျှို့ဝှက် အဘယ်မှာရှိအကျင့်ပျက်ရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲတဦးတည်းနေတဲ့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်ကြီးထွားလာစတင်ရန်မဟုတ်က de သားကွေးရဲများကသတိပေးလိုက်သည်။ "လက်ျာ, ကောင်လေး-ဏလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေကြိုးစားပြီးစတင်အသုံးမပြုပါ" ဟုသူကပြောပါတယ်။ "သင်တို့သည်အလေ့အကျင့်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်။ "
Steelers '' ဂျိမ်း Conner ကင်ဆာရောဂါမရှိဘဲအသက်ရှင်ဖို့တစ်ပါတ်ခဲ့
ကင်ဆာ metastasis ၏နံပါတ်များ Crunching
အိန္ဒိယ: | ဝန်ကြီးချုပ် Jaitley "နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာကုမ္ပဏီကြီး, ဉာဏကြီးစိုး" ဟုခေါ်သူတစ်ဦး "တန်ဖိုးထားမိတျဆှေ" ရှုံးနိမ့်ဆိုပါတယ် အိန္ဒိယသတင်း
Bitumba: FALLY IPUPA ဆန့်ကျင် MARCHOUSE BA ဘွဲ့အမှန်တရား EBIMI Botala - ဗွီဒီယို
အစာအိမ်ဓာတ်ငွေ့မှသက်သာရာရစေရန်4စက်ရုံ
"တစ်ဦးကအမှန်တကယ်အမှား": Raymond Domenech လုံးဝသည်သူ၏လက်ထပ်ထိမ်းမြားအဆိုပြုချက်ကိုလွဲချော်ထားပါတယ်မည်သို့မည်ပုံ
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်3,332